The Rohingya News Bank : IIMM
Showing posts with label IIMM. Show all posts
Arsa is being used to destabilize the Rohingya camp
Former Foreign Secretary and North South University South Asian Institute of Policy Governance Fellow Professor. Shahidul Haque said many believe that the Myanmar army is using the terrorist group Arsa to destabilize the Rohingya camp in Cox’s Bazar. If the Rohingyas do not unite now, Arsa’s dominance will expand. This will weaken the efforts to establish the rights of the Rohingya.
Shahidul Haque made the remarks atawebinar on Thursday to establish justice for the Rohingya.
The talks were held on the sidelines of the 20th General Assembly of the International Criminal Court (ICC). The webinar was jointly organized by Bangladesh, Gambia and Brussels-based human rights group No Peace Without Justice. The discussion was moderated by Alison Smith, Director of No Peace Without Justice.
Labels: 2021, ARSA, ASEAN, en, ICC, ICJ, IIMM, NUG, OIC, Rohingya, Tun Khin, Yasmin Ullah
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အထောက်အထား ကုလစုံစမ်းသူတွေ စတင်စုဆောင်း
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ- ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာတုန်းက ၄၂ ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီညီလာခံမှာ အစီရင်ခံတင်ပြနေတဲ့ IIMM မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား အဖွဲ့ ဥက္ကဌ Nicholas Koumjian
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြင်းထန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထား၊ မှတ်တမ်းတွေကို နိုင်ငံထဲ သွားခွင့် မရသေးပေမဲ့လည်း စတင်စုဆောင်းနေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား (IIMM) အကြီးအကဲက ပြောလိုက်ပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တာကို ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေအပေါ် သေကျေထိခိုက်တဲ့အထိ နှိမ်နင်းနေတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ အနေနဲ့လည်း အမိန့်ပေးလို့ လုပ်ရပါတယ်ဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးလို့ မရနိုင်ကြောင်း IIMM အကြီးအကဲက ဗွီအိုအေနဲ့ သီးသန့်မေးမြန်းရာမှာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ IIMM အကြီးအကဲ Nicholas Koumjian ကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။
Labels: 2021, IIMM, mm, ကုလ, သတင်း, အထောက်အထား
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တ ရား သတင်းလွှာ (၂)
Labels: 2020, IIMM, mm, pdf, သတင်းလွှာ
Will Facebook Sit On The Evidence Of The Genocide Against The Rohingyas?
On June 8, 2020, The Gambia filed an application for discovery with the U.S. District Court for the District of Columbia. The application asks the Court to compel Facebook to provide information related to the personal Facebook accounts of Myanmar officials. The information that The Gambia seeks is to be used in an action brought by The Gambia against Myanmar in the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, The Netherlands.
Roshida, 22, poses foraphoto on December 1, 2017, in Cox's Bazar, Bangladesh. She fled to ... [+]
Labels: 2020, en, Facebook, Genocide, ICJ, IIMM, News, Rohingya, UN
ICJ တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာကိစ္စ IIMM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေ
15 စက်တင်ဘာ၊ 2020
၄၂ ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီညီလာခံမှာ အစီရင်ခံတင်ပြနေတဲ့ IIMM မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား အဖွဲ့ ဥက္ကဌ Nicholas Koumjian
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ (IIMM) က အဖွဲ့ရဲ့ တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရရှိခဲ့တဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီကို အစီရင်ခံ တင်ပြရင်း ကုလ အဖွဲ့ ဝင် နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ IIMM အဖွဲ့ကို ဆက်လက် ထောက်ခံ အားပေး ဖို့ကို IIMM အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က ထပ် မံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, ICJ, IIMM, mm, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်, မြန်မာ, သတင်း
Rohingya Symposium: Concluding Comments – “And Miles to Go…”
The contributions in the symposium this past week have brought up multiple issues and perspectives, pointing to challenges in the quest for justice and accountability for the Rohingya, and the role of international law. Rather than go over what has been highlighted already, here areafew reflections, linked to the international legal developments and the wider context.
Labels: 2020, Article, en, ICC, ICJ, IIMM, Rohingya Symposium
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို Facebook အချက်အလက်တွေ မျှဝေ
26 သြဂုတ်၊ 2020
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေး သူတွေကို Facebook မှာ ရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝေမျှ ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ Facebook ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ အမုန်းတရားတွေ ဖြန့်နေတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းပစ်ဖို့ဆိုပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက Facebook ကနေ ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ် နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အကောင့် စာမျက်နှာတွေကို မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ (IIMM) ကို ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း Facebook ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်က အင်္ဂါနေ့က ရိုက်တာ သတင်းကို ပြောလိုက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2020, Facebook, IIMM, mm, ကုလစုံစမ်းရေးအဖွဲ့, သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေပေးဖို့ Facebook ငြင်းဆို
12 သြဂုတ်၊ 2020
Facebook ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုခင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား တွေကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ (IIMM)ကို မပေးသေးဘူး လို့ IIMM အဖွဲ့ ရဲ့ အကြီးအကဲက ပြောပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်တွေပေါ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ IIMM နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ် လို့ Facebook က ပြောထားပေမဲ့ အထောက်အထားတွေကို ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ IIMM အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သူ Nicholas Koumjian က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, Facebook, ICJ, IIMM, mm, Nicholas Koumjian, ကုလအချက်အလက်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့, မြန်မာနိုင်ငံ, သတင်း
19 နိုဝင်ဘာ၊ 2019
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ယန္တရား IIMM က ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ယန္တရားနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ကနေ ၁၄ ရက်နေ့ အထိ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ခရီးစဉ် ကိုတော့ IIMM အကြီးအကဲ Nicholas Koumjian ဦးဆောင်ပြီး ကောဇ့်ဘဇားက ဒုက္ခသည် အသိုင်းအ၀ိုင်း ကိုယ်စားလှယ် တွေ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ကြေ ညာချက် ထုတ်ပါတယ်။
Labels: 2019, IIMM, mm, Nicholas Koumjian, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာအရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် တာဝန် ရှိမရှိ အကဲဖြတ်ရန် ကုလသမဂ္ဂ တောင်းဆို
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်း စစ်ဆေးသူများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်တင်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားခဲ့ကြောင်း ပြောသည် / Reuters
ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် ဘင်္ဂါလီများအပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများအတွက် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥပဒေ ကြောင်းအရ အရေးယူနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကဲဖြတ်ချက် ရယူရန် ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေး သူများက အင်္ဂါနေ့တွင် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မည်သည့်အဆင့်အထိ တာဝန်ရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ၎င်းတို့တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ထူထောင်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အချက်အ လက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။
Labels: 2019, DASSK, IIMM, mm, ကုလ, မစ္စယန် ဟီးလီ, မာဇူကီ ဒါရပ်စ်မန်း, ဧရာဝတီ, ဆောင်းပါး, တောင်းဆို
IIMM ကုလစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရား မြန်မာအစိုးရလက်မ ခံပယ်ချ
11 စက်တင်ဘာ၊ 2019
ဂျီနီဗာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းt
IIMM မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား အဖွဲ့ ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေတဲ့ အတွက် မြန်မာအစိုးရက လုံးဝလက်မခံတဲ့ အပြင် နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးတရားစီရင်မှုကိုလည်း လက်သင့်ခံ မှာမဟုတ်ဘူးလို့ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ဂျီနီဗာ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ညီလာခံမှာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်က တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, IIMM, mm, ကုလစုံစမ်းရေးအဖွဲ့, ပယ်ချ, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ, သတင်း
IIMM ကုလစုံစမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ အချက်အလက်စုဆောင်း ရေးအဖွဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ
IIMM အကြီးအကဲဖြစ်သူ Nicholas Koumjian လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ ရှင်းလင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ (IIMM) အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ဆိုးဝါးတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ် ရာဇ၀တ်ကြောင်းအရ အရေးယူတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ စတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကုလစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာကို ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကို ဒီကနေ့ တင်သွင်းသလို၊ ဘယ်လို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမလဲ ဆိုတာကိုလည်း IIMM အဖွဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူက ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ အခု လုပ်ငန်းစတင်လိုက်တဲ့ IIMM နဲ့ အရင် ရှိထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ FFM တို့ သဘော သဘာဝ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ကိုသားညွန့်ဦးက ပြောပြပေးမှာပါ။
Labels: 2019, FFM, IIMM, mm, Nicholas Koumjian, ကုလစုံစမ်းရေးအဖွဲ့, လု့အခွင့်အရေးကောင်စီ, သတင်း
နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ မြန်မာပူးပေါင်းဖို့ ကုလမဟာမင်းကြီး တိုက်တွန်း
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီး Michelle Bachelet
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (IIMM) အနေနဲ့ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ (UNFFM) ရဲ့ အားကောင်းလှတဲ့ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူနိုင်ရေး မှုခင်း ဖြစ်ရပ်တွေကို စုဆောင်းသွားတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီး Michelle Bachelet က ပြောပြီး မြန်မာအစိုးရကိုလည်း အခုလို တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
Labels: 2019, IIMM, Michelle Bachelet, mm, UNFFM, ကုလမဟာမင်းကြီး, မြန်မာ, သတင်း